CANBAAREYN ISGU DEYGII SHIRQOOLKII DILKA BADHASAAB RAMAAX EE XAGA RAABI KA FASHILMAY | Saxil News Network
CANBAAREYN ISGU DEYGII SHIRQOOLKII DILKA BADHASAAB RAMAAX EE XAGA RAABI KA FASHILMAY
Runtu fantoo ma ahaa Xisbiga Waddani Burco inaay dagaal sookeeya gelis isgu deyeey wax badan ku guulaysan
Mucaaridka Somaliland miisga talada hala soo fadhiisyo hana laga hortego wixii dalka burbur u keeni karaa ee sii yar loo soo adeegsan karo shirqool shisheeyee qaar urur dimeed iyo nidaam qabiil intaba.
Anigoo ah muwaadiin reer Somaliland jecelna nabada xasiloonida iyo wadjirka isku duubnida dadkayga iyo dalkayga Waxaan aad u canbaaraynayaa shirqoolkii la’ la beegsaday Badhasaab Ramaax oo ku sugnaa Gobolka Ceerigaabo xil wareejiintii warkaas oo maanta ku arkay warbaahiinta madaxbanaan qaarkooda oo
runti aad uga damqaday fal-falka noocaas ah iyo shirqoolada qarsoon ee loogu waxyeellanyo dalkeena Somaliland xasiloonidiisa wadjirkiisa iyo qaranimadiisaba.
Waxaa aynu wada ognahay oo adreesanahay in Ceerigaabo iyo Boorame ka socodaan kacdoon hoose oo ku liid ah qaranimada Somaliland lagana soo abaabuulo arrimo diidmo talo qaadasho dowladda Somaliland. Cida hawshaas ka dambaysa lugta ku leh waynu garan karnaa jecel in dalku galo khal-khal iyo shirbeeleed. Xisbiga Waddani anigu shakhsiyaan waan tuhunsanahay inuu rabo colaad sookeeyee oo dalka ka dhacda madaama inaanu rajo iyo guul ka qabin tartaan doorasho una diyaar ahayn. Xisbiga Waddani xiisada Boorame kallin weyn iyo raad buu ku leeyahay.
Ceerigaabo taageero iyo xamaasad beeleed iyaa ku hurtay wana aynu ognahay Mayirka Ceerigaabo inaanu Hargeysa dowladda u hayn talo wadaag kana tirsan yahay masuuliyiinta sare ee Xisbiga Waddani kuna faano awood gaar ah sheegto amarna Xukuumadda Somaliland ka qaadan.
Runtu fantoo ma ahaa Xisbiga Waddani Burco inaay dagaal sookeeya gelis isgu deyeey wax badan ku guulaysan wayday ila imika sidaa darteed Boorame Iyo Ceerigaabo Berbera iyeey dhaq-dhaqaajiyaan marba shacabkooda hab reereed qabiil.
waxaynu eegnaba berito iyo Go’aanka Xisbiga Waddani ka yidhaadan doorashada aay iyaagu doonayaan inaay baaqato dib u dhacdo sii aay u suurto geliyaan khal-khal abuur kacdoon beeleed deeganaada qaarkood. Ilaahay kama dhigoo laakiin Cabdiraxmaan Cirro wuxuu raad hayaa wadadii Alle Haw Naxarriistee (Abdiraxmaan Axmed Cali Tuur) Oo ahaa halgamahii SNM maadxweynahii ugu horreeyey Somaliland si nabad ah xilka loogu wareejiyeey hada sii haw yar magaciisi taariikhdii SNM god madow ku ridi gaadhay beeshuna ku taageertay yaaan darro. Xamar ka dooraty iyo colaad sookeeyey oo Beelahii walaalahii SNM ku kala irdeeyo.
ali biime <calibiime@live.co.uk